Inkcubeko eyahlukileyo-iTrump Eco Technology Co, Ltd.
Ulungelelwaniso lwamanzi olwandle
Siqokelele kumzi mveliso kangangeminyaka engama-38. Yintoni exhasa ukukhula kwethu nenkqubela phambili? Ngamandla okomoya okhaliphileyo kunye nenkolelo kunye nokuziqhelanisa nezinto ezintsha eziqhubekayo. Ayinakuphikwa into yokuba sinezixhobo eziphambili kunye neendlela zolawulo, kodwa amandla amakhulu aqhubayo abangelwa yile mvula ingabonakaliyo yimvelaphi yempumelelo yethu.
Okwangoku, njengenkampani eyahlukeneyo kunye neenkcubeko ezininzi, siyaqonda ukuba uphuhliso oluzinzileyo lufuna ukuzinikezela kwexesha elide kunye noxanduva oluhlangeneyo kwimicimbi yezoqoqosho, ezendalo nezentlalo.
Xa sijongene nokunyuka kongcoliseko lokusingqongileyo, sizibophelele kuphuhliso nakwizinto ezintsha ezinobuhlobo kokusingqongileyo. Vumela iiprojekthi zisebenzise izinto ezinobungozi kwindalo okanye zisebenzise izixhobo ezinokuphinda zisebenze kwakhona.
Vumela wonke umsebenzi asebenze ngokuzimisela, athande ishishini lethu kunye nesikhundla, kwaye ahlaziye rhoqo izakhono zabo nolwazi. Wonke umsebenzi makabe yingcali kwizikhundla zakhe. Vumela abasebenzi babelane ngeziqhamo zophuhliso lwendibaniselwano kunye neentsapho zabo kunye nabantwana. Siyintsapho enkulu.
Vumela abathengi ukuba bafumane iimveliso ezixabiseke ngakumbi, abasebenzi mabafumane uphuhliso oluthembisayo, benze uluntu lube nobuntu ngakumbi kwindalo, kwaye abathengi mabaphucule kwaye baphucule. Abathengi, abasebenzi, abathengisi kunye noluntu bahamba kunye nophuhliso oluzinzileyo.